Afrika: Mety ho Afrikana ve ny fotsy hoditra? – Tapany 1	Voadika ny 27 Janoary 2011 6:48 GMT
Zarao: Mety ho Afrikana ve ny fotsy hoditra? ,tsy dia mino an'izany loatra i Sentletse Diakanyo, Afrikana tatsimo mpitoraka bilaogy . Hoy izy, “raha ara tantara, tsy sarotra mihitsy ny dikan'ny teny hoe “Afrikana”. Ho an'ny Afrikana amin'izao fotoana, mbola tsy sarotra ihany koa ny dikan'izany. Ny Afrikana manerana ny kaontinanta sy ny ampielezana kosa no nahalala efa ela ny dikan'izany manohatra azy ho mainty hoditra.”
Afrika MaintyAfrika Atsimo
Foko sy FiavianaTantara